Macallinka Man United ee Ole Gunnar Solskjaer oo ciyaartoydiisa u sheegay inay ku socdaan Waddadii looga cayrin lahaa Old Trafford – Gool FM
(Manchester) 08 Okt 2019. Macallinka kooxda Manchester United ee Ole Gunnar Solskjaer ayaa la soo warinayaa inuu xiddigaha kooxdiisa u sheegay inay ku socdaan waddadii lagu cayrin lahaa isaga haddii qaab ciyaareedkoodan xun uu sii socdo.
Red Devils ayaa guul gaartay labo kulan oo horyaalka Premier League ah xilli ciyaareedkan, waxaana kaliya ay labo dhibcood ka sarreeyaan booska looga laabto horyaalka, kaddib markii ay ku bilowdeen horyaalka bilowgoodii ugu xumaa muddo 13 sano ah.
Solskjaer oo aragti ka dhiibanayey kulankii ay kooxdiisa guuldarro 1-0 kala soo laabatay naadiga uu hoggaamiyo macallin Steve Bruce ee Newcastle United Axaddii ayuu tababaraha reer Norway u sheegay ciyaartoydiisa in mustaqabkiisa Old Trafford ay shaki geliyeen oo ay ku socdaan wadadii lagu eryi lahaa isaga.
Wargeyska The Sun ayaa warinaya in macallinkii hore ee Cardiff City inuu arki karo 10 bilood oo uu ku sugnaa Manchester oo soo gabagabaysa haddii kooxdiisa Man Utd ay si lama filaan ah guuldarro kala kulanto Liverpool kaddib ciyaaraha caalamiga.
Si kastaba ha noqotee, wararku waxa ay intaa ku daryaan in Solskjaer uu xitaa lumiyey kalsoonida guddoomiyaha fulinta ee kooxda Man United, Ed Woodward kaddib markii uu shan kulan kaliya guul gaartay 23-kii ciyaarood oo uu maamulay naadiga.